एन आर एन ए को महिला संयोजकमा मरहट्टानै किन ? :: NepalPlus
अहिले मैदानमा उत्रिएका महिला उमेदवारहरु मध्ये संगिता मरहट्टा महिला संयोजकमा केहि गर्न सक्ने, नेत्रित्व लिन सक्ने महिला हुन् । किन त ?
उनी धेरै समय सक्रिय पत्रकारिता गरेकि महिला हुन् । पेशाले पत्रकार उनले दक्षिण एशियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो — रेडियो सगरमाथाबाट रेडियो पत्रकारिताको शुरुवात गरेकी हुन् । यसअघि उनी छापा पत्रकारितामा संलग्न थिईन् ।
बेलायतको थमसन फाउन्डेशनमा उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अन्तर्गत प्रसारण पत्रकारितामा डिप्लोमा गरेकी मरहट्टाले बेलायतकै प्रतिष्ठित वेष्टमिनिष्टर विश्वविद्यालयबाट पत्रकारितामा मास्टर्स गरेकी छिन् । उनले नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता तथा अंग्रेजी साहित्यमा स्नातक गरेकी छन् । यसरि हेर्दा उनको भाषामापनि दखल छ ।
बिबिसी नेपाली जस्तो प्रतिष्ठित संचार माध्यममा कार्य गरेकाले उनी यसैपनि क्षमतावान महिला हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । उनले धेरै मानिसहरुलाई देख्ने, भेट्ने र तिनका चाख अनि समस्याहरु सुन्ने र बुझ्ने गरेकि छन् । त्यसैले उनलाई अहिला नेत्रित्व चुन्दा उचित हुन सक्छ ।
उनको अर्को सकारात्मक पाटो भनेको उनी एन आर एनएको लगभग शुरुवाती देखिनै यो संस्थामा आबद्द छिन् । त्यसैले महिलाहरु नेत्रित्वमा आउन नचाहनुका कमजोरीहरु उनलाइ बढि जानकारि हुन सक्छ । बेलायतमा बसेर ब्यवशायमापनि सफल देखिएकले उनले प्रवाशमा महिला उद्दमी बन्न र् बनिसकेकालाई यो संस्थामा आबद्द गराउन, महिला उद्दमी बनाउन, ब्यवशायमा संलग्न गराउन अनेक उपाय, अक्किल र सुझाव दिन सक्छिन् ।
त्यसो त मरहट्टालाई महिलाको नेत्रित्वकर्ताका रुपमा मात्रै सिमित राखेर हेर्नु उचित हुन्न । किनकि उनी कुनै पुरुषहरु भन्दा कम र कमजोर छैनन् । उनी महिला संयोजक बनेपनि उनले समग्र एन आर एन् एलाईपनि उचाईमा पुर्‍याउन अर्को योगदान गर्न सक्छिन् । केन्द्रिय पदमा दाबेदारी गर्ने पुरुषहरु भन्दापनि अझ सफल नेत्रित्व दिन सक्ने अनुभव, आँट र ज्ञान मरहट्टामा छ ।
एक हिम्मतिली, विश्वभरका महिलाहरुमा अन्यको भन्दा दह्रो पहुँच, परिचय र आँटिलीपनि भएकाले उनले सफल नेत्रित्व दिन सक्छिन भन्ने आशा र विश्वाश धेरैको छ । समग्रमा हेर्दा एन आर एन एको महिला नेत्रित्वकर्तामा मरहट्टा भन्दा उचित उमेदवार अर्को देखिँदैन ।
त्यसो त आफू किन महिला संयोजक बन्ने ? यस विषयमापनि उनले आफ्ना स्पष्ठ धारणा सार्वजनिक गरेर नेत्रित्वका लागि सहि मार्ग कोर्न सक्ने छनक दिएकि छन् । उनले घोषणा गरेका नौ बुँदा हेर्दापनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ । हेर्नुहोस संगिता मरहट्टाले सार्वजनिक गरेका नौं बुँदे घोषणा पत्र !!
महिला उपसंयोजक भैसकेपछि यस अभियानमा निरन्तरता दिन अब आइसिसि महिला संयोजकको भुमिकामा खरो उत्रिन म आत्मादेखि नैं तयार छु । विश्वभरका एनआरएनए अभियन्ता, अग्रज, मेरा समकक्षी सबैजना संग सकेसम्म मैले सरसल्लाह गरेर आफ्नो योजना अघि बढाउने निधो गरेकी हुं ।
धेरै लामो र संभव हुन नसक्ने योजनाहरु कागजमा मात्र सुन्दर लाग्छन् । त्यसैले संस्थाको विधि, विधान र सिमाभित्र रहेर अग्रजहरुले अघि सार्नुभएका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिंदै मैले निम्न अनुसारका योजना बनाएकी छु । यी कार्यहरु ६ वटा क्षेत्रबाट छानिने क्षेत्रीय महिला संयोजकहरुसंगको विस्तृत छलफल र सहकार्यबाट पुरा हुनेछन् ।
उम्मेदवार, महिला संयोजक, गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्